Xiran motor loop darawal-HBS86H - ​​Shiinaha Changzhou ay jeceshahay Motor
nidaamka stepper drive Howlsocodsiinta hybrid HBS86H The midaynaysa technology gacanta Howlsocodsiinta galay stepper digital eryi dhammaataan. Oo alaabta this ansixiyeen encoder ah indhaha la xawaaraha sare warcelin sampling booska 50 μ s, mar weecasho booska u muuqataa, waxay isla markiiba la hagaajin doona. Alaabta Tani waa socon faa'iidooyinka of drive stepper iyo drive Howlsocodsiinta ah, sida kulaylka hoose, gariirka yar, dardargelinta si degdeg ah, iyo wixii la mid ah. Noocan ah drive Howlsocodsiinta kale oo uu leeyahay qaab ciyaareed aad u fiican kharashka.
u Aan badiyay tallaabo, sax Sare ee qaabkaaga
u 100% Xuddunta saarka qiimeeyo
u Doorsoome technology gacanta hadda, hufnaan hadda Sare
u gariirka Small, siman oo lagu kalsoonaan karo dhaqaaqaan xawaare yar yahay
u Dardar iyo decelerate gacanta gudaha, horumar weyn in macaanaa ee laga bilaabo ama joojinta motor ka
u User u qeexan tallaabooyinka micro
u socon la 1000 iyo 2500 khadadka encoder
u No sixitaanka ee codsiyada guud
u badan hadda, in ka badan danab iyo in ka badan ilaalinta baadi booska
u iftiin Green ka dhigan socda nuurka cas waxay ka dhigan tahay ilaalinta ama line off
3. Dekedaha Hordhac
3.1 tusin iyo PEND saarka signal ports
In meel wax soo saarka signal +
In wax soo saarka signal booska -
saarka Alarm +
saarka Alarm -
3.2 Input Control Signal Ports
signal garaaca wadnaha +
5V ama 24V
signal garaaca wadnaha -
signal Direction +
Jaanqaadaan 5V ama 24V
In loo sahlo signal +
In loo sahlo signal -
3.3 Encoder Input Signal-celinta Ports
wajiga B Encoder +
Encoder wajiga B -
wajiga A Encoder +
Encoder wajiga A -
dhulka xoog Input
3.4 Power Wajahadda Ports
Motor Phase Wire Dekedaha Input
Wajiga A + (Red) Motor Phase A
A- Phase (Blue)
Wajiga B + (Green)
B- Phase (Black)
Dekedaha Power Input
Power Input + AC24V-70V DC30V-100V
4. tignoolojiga Index
24 ~ 70VAC ama
Output hadda 6a PWM 20KHz
Garaaca wadnaha max Frequency
heerka Isgaarsiinta 57.6Kbps
l The ka badan booska kala duwan qalad loo dhigay karaa HISU ah
Iska ilaali ciidda, ceeryaanta saliid iyo gaas xoqe
Coolingmethod qaboojinta Dabiiciga ah ama qaboojinta hawada qasbay
VCC jaanqaadi 5V ama 24V;
R (3 ~ 5K) waa in la xiran si loo xakameeyo terminal signal.
5.2 Connections in Common Cathode
5.3 Connections inay kala Signal
5.4 Connections in 232 Isgaarsiinta Serial Interface
Power Supply in HISU
5.5 iskugu xigxigaan Chart ee Control Signals
Si looga fogaado hawlgallada qalad qaar ka mid ah iyo wixii khaldama, PUL, DIR iyo ENA waa in ay raacaan xeerarka qaar ka mid ah, sida ku cad jaantuska soo socda:
T1: ENA waa in ka hor DIR noqon by ugu yaraan 5μ s. Sida caadiga ah, ENA + iyo ENA- waa NC (ma xiran).
T2: DIR waa in ka hor PUL laayeen firfircoon noqon by 6μ s si loo hubiyo in jihada saxda ah;
T3: width Pulse aan ka yarayn 2.5μ s;
T4: width heerka Low aan ka yarayn 2.5μ s.
6. waa inuu dhex geliyaa Switch Setting
6.1 dhaqaajiso Edge Setting
SW1 waxaa loo isticmaalaa dejinta laayeen kaakacaysa of signal la gelin ah, "off" waxaa loola jeedaa ku laayeen kaakacaysa waa ku laayeen baxna, halka "on" waa ku laayeen oo soo dhacaysa.
6.2 Orodka Direction Setting
SW2 waxaa loo isticmaalaa dejinta jihada socda, "off" waxaa loola jeedaa CCW, halka "on" waxaa loola jeedaa CW.
6.3 tallaabooyinka Micro Setting
The goob tallaabooyinka micro waa in miiska soo socda, halka SW3,
SW4 , SW5 , SW6 jira oo dhan on, tallaabooyinka micro default gudaha gudaha waa dhaqaajiso, ratio waxa lagu dejinta karaa HISU ah
7. unu alarm iyo flicker LED frequency
Description in unu ah
Baadi tixraaca danab ku drive
Beegyada uu u geliyaan qalad in drive
Error occurs when the actual position followingerror exceeds the limit which is set by xadka baadi booska.
Appearance iyo Rakibaadda Dimensi
Connection caadiga ah
drive Tani waxay ku siin karaan encoder la korontada of + 5V, 80mA hadda ugu badnaan. Waxa ay ansixiyeen habka tirinta quadruplicated-soo noqnoqoshada ah, iyo ratio xallinta encoder ku tarmeen 4 waa la karsado halkii beddesha of motor Howlsocodsiinta ah. Halkan waa xidhiidhka ka caadiga ah ee
10. dhimaya Setting
Habka goob dhimaya of drive 2HSS86H-KH waa in la isticmaalo wax burinna HISU ah iyada oo 232 dekedaha isgaarsiinta serial, oo kaliya in sidan aynu u dejinta kartaa xuduudaheedu aan rabno. Waxaa jira dhowr ah oo xuduudaheedu default ugu wanaagsan ee motor u dhigma kuwaas oo daryeel
beddelo by injineerada our, dadka isticmaala oo kaliya u baahan tahay tixraac jadwalka soo socda, xaalad gaar ah oo qarka u saaran xuduuda saxda ah.
qiimaha dhabta ah = qiimaha Calan × aragti u dhigma
Waxaa jira guud ahaan 20 gaadmada ah dhimaya, isticmaali HISU ka soo bixi ku soo koobin qaybiyay si ay drive, sharaxaada si faahfaahsan u qaabeynta u dhimaya nabadgelyada kasta oo ay yihiin sida soo socota:
loop hadda Kp
Kordhi Kp si ay u kaca hadda si degdeg ah. Gain saami go'aamiso jawaabta of drive si dejinta amarka. Low-dheelitiran Gain bixiyaa nidaam xasilloon (ma lagu baayici karo), ayaa qallafsanaan yar yahay, oo aanay khiyaanada hadda, keenaya qaab saboolka ah ee raad amarka goob hadda in tallaabo kasta. qiimaha faa'iido saami aad u badan oo ka dhigi doonaa oscillations iyo
loop hadda Ki
Dheellitir Ki si loo yareeyo qaladka joogto ah. Qayb Gain caawisaa drive ah in ay ka gudbaan khaladaad hadda ma guurto ah. Qiimaha A hooseeyo ama eber qayb Gain laga yaabaa in khaladaad hadda ku nastaan. Kordhinta faa'iidada muhiim yarayn kartaa qaladka. Haddii Gain ka qayb aad u ballaaran yahay, nidaamka
waxaa laga yaabaa in "ugaarsi" (baayici karo) hareeraha meel la doonayo.
Wehliyaha Esplanaden This parameter is used to change the damping coefficient in case of the desired operating state isunder resonance frequency.
loop Jago Kp
beegyada uu PI ee loop booska. qiyamka default waa ku haboon inta badan codsiga, aad uma baahna in ay ku badasho. Nala soo xiriir haddii aad qabto
loop Jago Ki
loop Speed ​​Kp
beegyada uu PI ee loop xawaaraha. qiyamka default waa ku haboon inta badan codsiga, aad uma baahna in ay ku badasho. Nala soo xiriir haddii aad qabto
loop Speed ​​Ki
Halbeegga Tani waxay saamayn ku Xuddunta ah ma guurto ah oo motor ah.
loop Close hadda This parameter affects the dynamic torque of the motor. (The actual current = open loop current +close loop current)
Halbeegga waxaa loo dhigay si loo xakameeyo transistor optocoupler Alarm wax soo saarka. 0 waxaa loola jeedaa transistor la gooyo marka nidaamka waa in shaqada ee caadiga ah, laakiin marka ay timaado cillad of drive, transistor ah
noqdo tabinta. 1 hab ka soo horjeeda in 0.
Jooji qufulka awood
In loo sahlo Control
Jago baadi xadka
Nooca Motor selection
amarka, laakiin marka ay timaado ma, transistor uu noqdo tabinta. 1 hab ka soo horjeeda in 0.
Xadka of booska ka dib qalad. Marka baadi booska dhabta ah ka badan qiimaha this, drive ka tegi doonaa hab qalad iyo wax soo saarka qalad uu noqon doono
firfircoonaan. (Qiimaha dhabta = qiimaha go'an ee × 10)
Halbeegga waxaa loo dhigay si loo xakameeyo macaanaa ee xawaaraha baabuurta halka xawaaraha ama deceleration, ugu weyn qiimaha, ee macaan yahay xawaaraha ee xawaaraha ama deceleration.
User-qeexay p / r This parameter is set of user-defined pulse per revolution, the internal default micro steps inside isactivate while SW3、SW4、SW5、SW6 are all on,
users sidoo kale karaan tallaabooyinka micro oo ay daaro daraa dibadda ah. (The tallaabooyinka dhabta ah micro = qiimaha go'an
11. Processing Methods in Dhibaatooyinka iyo unu Common
11.1 Power on iftiinka xoogga off
n No aqbasho awoodda, fadlan hubi circuit korontada ah. danab waa mid aad u yar yahay.
11.2 Power on light alarm cas on
n Fadlan hubi signal warcelin motor iyo haddii motor ku xiran yahay drive ah.
n drive Howlsocodsiinta stepper waa ka badan ama ka yar danab danab. Fadlan hoos ama kordhin danab talooyin ah.
11.3 iftiin alarm Red on dib markii motor socda a small
n Fadlan hubi ku fiilooyin wajiga motor haddii ay si sax ah ku xiran , haddii kalese , fadlan tixraac ah 3.4 Dekedaha Power
n Fadlan hubi dhimaya ee drive haddii ulihii ka motor iyo khadadka encoder waxaa u dhiganta la soo koobin dhabta ah, haddii aan, iyaga si sax ah loo dhigay.
n Fadlan hubi haddii inta jeer ee signal garaaca wadnaha waa mid aad u dhakhso ah, sidaas motor ayaa laga yaabaa out of waxa xawaaraha lagu qiimeeyo, iyo waxay keeni in qalad booska.
11.4 Ka dib markii signal garaaca wadnaha aqbasho laakiin motor ma running
n Fadlan hubi signal garaaca wadnaha talooyin ah oo silig ku xiran yihiin in hab la isku halayn karo.
n Fadlan hubi in hab talooyin garaaca wadnaha waxaa u dhiganta leh hab dhabta ah talooyin ka dhigi.
Previous: motor loop xiran darawal-HBS57
Next: motor stepper darawal-DM420A
Xiran Loop Motor Driver
Xiran Loop Stepper Driver
Xidhan Loop Stepper Motor Oo Driver
xidhan loop Stepper Motor Driver
motor stepper darawal-DM2722A